ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နှစ်ပတ်လည် ချယ်ရီပန်းပွဲတော် အခမ်းအနားနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်
MYANMAR HOTEL AND TOURISM LAW
Tourism Investment Environment
Guide to Investment and Doing Business
Directives for Coastal Beach Areas
Administration and Finance Department (DHT)
Hotels and Tourism Supervising Department
International & Regional Cooperation Department (DHT)
Indawgyi Lake Sanctuary
CRUISES & YACHTS COMPANIES
Links of the airline websites
Domestic Train Schedule
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၁၁) ရက်
ဂျပန်နိုင်ငံ Sakura Parliamentary League မှ အမှု့ဆောင်ဒါရိုက်တာ Mr. Hiromichi WATANABE ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉) ရက်နေ့မှ (၁၅) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် နှစ်ပတ်လည် ချယ်ရီပန်းပွဲတော် အခမ်းအနား၊ ဆက်စပ်အစည်း အဝေး များ၊ ရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းလုပ်ငန်းများ လေ့လာဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမောင် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သည် ရန်ကုန်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ (၈.၄.၂၀၁၇) ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် ANA လေကြောင်း လိုင်းဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ တိုကျိုမြို့ နာရီတာလေဆိပ်သို့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိစဉ် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ၊ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသူရိန် သန့်စင်နှင့် သံရုံးအဖွဲ့မှ လာရောက်ကြိုဆိုကြပြီး တည်းခိုရာ Grand Price Hotel Tadanawa သို့ ရောက်ရှိပါသည်။
၄င်းနောက် တိုကျိုမြို့အတွင်း လမ်းမများဘေးတွင် စိုက်ပျိုးထားသော ချယ်ရီပန်းများ ပွင့်ဖူးနေ သည်ကို မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြ ပါသည်။ ညပိုင်းတွင် Japan- Myanmar Parliamentary Friendship Association မှ ဂျပန်ရိုးရာစားသောက်ဆိုင်တွင် ညစာဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံရာ နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ Djibouti သမ္မတနိုင်ငံ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး Mr. Ahmed Araita Ali လည်း တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
ညစာစားပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်၊ Djibouti သမ္မတနိုင်ငံ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး Mr. Ahmed Araita Ali နှင့် ဂျပန်မြန်မာ ပါလီမန်ချစ်ကြည်ရေးအသင်း၏ အတွင်းရေးမှူး Mr. Hiromichi WATANABE တို့မှ ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ် ချယ်ရီပန်းပင်များ ပိုမိုစိုက်ပျိုးရေး၊ အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကျေးဇူးတင်စကားများ ပြောကြားကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်၊ ဇ၀နလမ်းအနီး၊ လွှတ်တော်သွားရာလမ်းတစ်လျှောက် ဗိုလ်ရှု့သဘင် အဆောက်အဦးအနီးတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၉) ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ- ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေး ချယ်ရီပန်းစိုက်ပျိုးပွဲတော်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့ သည့် မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများကို Sakura Festival Exchange Association မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mr. Terumi TAKAOKA ထံသို့ လက်ဆောင်ပေးအပ်ပြီး ဂျပန်မြန်မာ ပါလီမန်ချစ်ကြည်ရေးအသင်း အတွင်းရေးမှူး Mr. Hiromichi WATANABE ထံသို့ လက်မှု့ပန်းချီကားအား အမှတ်တရ လက်ဆောင် အဖြစ် ပေးအပ်ပါသည်။
နှစ်ပတ်လည် ချယ်ရီပန်းပွဲတော် အခမ်းအနားသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပသော အခမ်း အနားဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များလည်း လာရောက်လေ့လာလေ့ရှိရာ ချယ်ရီပန်းပွဲတော်ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအား ဆွဲဆောင်ဖမ်းစားနိုင်ရေးအတွက် အတွေ့အကြုံများ ရယူခြင်း၊ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်း၊ ပွဲတော်ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု့ဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဂျပန်နိုင် ငံရှိ ရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှု့များ အား လေ့လာခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
nei kaun: ye. la:
Good night/Good Bye
Myanmar lo matat' bu:
May I takeaphotograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:
be lau' le:
sel' mashi ba ne.
hou' ke khin bya.
hou' ke shin.
ma hpyi' nain bu:
hpyi' nain ba de
kegya. ba oun:
hla. lai' ta
... go thwa: gyin ba de
...be na: ma le:
te, de. thwa: ba
dima ya' ba
Be careful, don't drive too fast
be lau' kya. tha le:
ba saka: hma' tain
thin: baw: zei'
e. yei' tha
sa: thau' hsain
Building No. (33), Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Tel: 95 67 406129, 406130,
Host On: Forever Web Studio. Copyright © 2017 myanmartourism.org.